युवतीको बयान : ‘२५ तोला सुनले सजाएर पूजा गर्छौं भनेको थियो’:: Mero Desh
युवतीको बयान : ‘२५ तोला सुनले सजाएर पूजा गर्छौं भनेको थियो’
Published on: १२ पुष २०७६, शनिबार ११:१५
काठमाडौं । अशिक्षित परिवारका व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारेर ‘बलि चढाइएको’ घटना सार्वजनिक नभएका होइनन् । तर, राजधानीबाटै एकजना व्यवसायिक मोडललाई बलि चढाउने उद्देश्यसहित भारततर्फ लान खोजिएको समाचार बाहिरिएपछि सर्वसाधारणले आश्चर्य मानेका छन् ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ७ जना आरोपितलाई सार्वजनिक गरेर घटनाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थियो ।यो अवधिमा पीडित युवती स्वयम्ले चाहिँ के महसुस गरिरहेकी छिन् ? उनले एक महिनाको अवधिमा के-के भोग्नु पर्‍यो ? कसरी मृत्युको मुखबाट जोगिएर घर फर्किन सफल भइन् ? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै अनलाइखबरकर्मी गौरव पोखरेलले पीडितसँग लामो कुराकानी गरेका छन् ।
सांस्कृति कार्यक्रमको पूर्व तयारी कतिसम्म हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो । पूजा पनि स्वीकारेको थिएँ । तर, कुरा निजी मामलामा प्रवेश गरेपछि मैले घरमा दाइलाई सबै कुरा सुनाएँ
दादाले हेर यो पच्दैनपच्ने कुरा हो भन्नुभयो । त्यसपछि काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीलाई भेट्न भन्नुभयो । म टेकु गएँ । आधा घन्टा पर्खिए, बाहिर जानु भएको रहेछ । मेरो कुरा राखेपछि एकदमै सहयोग गर्नुभयो । मैले पनि त्यसपछि भएका सबै कुरा सुनाउन थालेँ ।
बिराटनगरमा हुने कार्यक्रममा मलाई लक्ष्मी माता बनाउने भनियो । पूजा पनि हुन्छ भनियो । कक्षा पनि केही लिनुपर्दैन । डकुमन्ट्री जस्तो खिच्छ भन्यो । यो पहिले भनिए भन्दा विल्कुलै फरक कुरा थियो
हामी विमानमा चढेपछि दिलकुमारीले बोकेको कालो धागो मेरो खुट्टामा लगाइदिइन् । तपाईंलाई ५ फन्को बाँध्नुपर्छ, पुजामा चाहिन्छ भनेकी थिइन्
प्रहरीलाई समयमै खबर गर्दा ‘बलि’ बाट जोगिइन्
घटनाका ७ आरोपितहरु । तस्वीरः
कोठामा फेरि हाइट नाप्ने कुरा आयो । ६ फिट चाहिन्छ, नत्र कार्यक्रम रोकिन्छ भनेको थियो । लगभग साढे ६ बजेतिर मलाई एकदमै असुरक्षित महसुस भयो । सपिङ गर्न पारि जानुपर्छ भन्न थालेका थिए । धेरै नै डर लागेपछि मैले म्यासेज गरिहालेँ । धन्न त्यसको केहीबेरमै सिभिल र ड्रेसमा भएका हतियारसहितको प्रहरी टोलीभित्र छिर्‍यो । भित्र भएका सबैजना पक्राउ परे । हामी सबैको फोन जफत गरिए । बाहिर गएर चौकीमा पुग्दा मलाई पछ्याउने व्यक्तिहरु पनि समातिइसकेका रहेछन् ।